Seinfeld သည် ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလတွင် Netflix သို့ရောက်ရှိနေပါသလား။ - Seinfeld
Seinfeld သည် ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလတွင် Netflix သို့ရောက်ရှိနေပါသလား။
Is Seinfeld Coming Netflix January 2021
အသေကောင်လမ်းလျှောက်သောအခါ netflix သို့ရောက်လေသည်
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် - လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်Aprilပြီ ၃ ရက်တွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုနောက်ဆုံးအကြိမ်တွင်ဂျော့ဆန်အလက်ဇန္ဒားသည်ဂျော့ချ်အလက်ဇန်းဒါးအားဂျော့ခ်ျအဖြစ်ဂျော့ခ်ျအဖြစ်ဂျော့ခ်ျအဖြစ်ဂျော့ခ်ျအဖြစ်ဂျော့ခ်ျအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ။ (David Hume Kennerly / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Netflix မှာ Triple9ကိုကြိုက်ရင်ကြည့်ချင်တဲ့ရုပ်ရှင် ၅ ကား သင်အပျိုစင်မြစ်စာအုပ်များကိုအစီအစဉ်အတိုင်းဖတ်ရန်လိုပါသလား။
Seinfeld သည် ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလတွင် Netflix တွင်ရှိမည်လော။
Seinfeld 2021 ခုနှစ်တွင် Netflix သို့လာမယ့်! ထိုသတင်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကြေငြာခဲ့ပြီးစီးရီး၏ပရိသတ်များသည်စီးရီးကို US ရှိလူကြိုက်အများဆုံး streaming ၀ န်ဆောင်မှုသို့ဆင်းသက်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ။
ဘယ်အချိန်မှာငါတို့အတိအကျမသိဘူး Seinfeld စီးဖို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
များသောအားဖြင့်ဤကြီးမားသောဝယ်ယူမှုများသည်ပထမနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဒါနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် သူငယ်ချင်းများ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Netflix ကထွက်ခွာနှင့်သောဖြစ်ပျက်ရဲ့အရာပါပဲ ရုံး က Netflix ကိုအရွက်နှင့်ဇန်နဝါရီလ 1, 2021 ရက်နေ့တွင်ဒေါင်းမှရွေ့လျားလာသောအခါ။
ဒီတော့ဒါကဖြစ်ပျက်တော့တာပါပဲ Seinfeld? စီးရီးဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့တွင် Hulu မှ Netflix သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်နည်း
ကျနော်တို့အကြောင်းကိုဘာမှမကြားရကြပြီ Seinfeld Netflix တွင်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုတော့မရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ဤအချိန်မတိုင်မီကြီးမားသောပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်အကြောင်းများကိုကြားရလေ့ရှိသည် Seinfeld ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့တွင်လာမယ့်ခဲ့သည်။
Netflix ကဘာလဲ သူက Seinfeld ဇွန်လ 2021 ခုနှစ်တွင် Netflix ကအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်, ထိုသို့သောကြောင့်ပါပဲ Seinfeld ၂၀၁၅ ဇွန်လတွင် Hulu သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Hulu တွင် streaming အခွင့်အရေးများရှိသည် Seinfeld ခြောက်နှစ်, ဒါကြောင့်စီးရီးဖွယ်ရှိသူတို့အားသည်အထိ Hulu အပေါ်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်
ငါတို့အရင်ကတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်းဒီအရောင်းအ ၀ ယ်တွေဟာတော်တော်လေးတင်းကျပ်တယ်၊ Seinfeld ကြောင်းစာချုပ် Hulu မှာတက်သည်အထိ Netflix ကထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
ကောင်းရင်ကောင်းမယ် Seinfeld ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာထက် Netflix ကိုစောစောစီးစီးထိမိပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
Netflix သည်ယခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်အသစ်ဖြန့်ချိမှုကိုစတင်ကြေငြာနေပြီဖြစ်ရာမကြာမီကျွန်ုပ်တို့ထွက်ပေါ်လာသင့်သည် Seinfeld တရားဝင်ပြက္ခဒိန်တွင်နောက်လာမည့်လအတွက်ဖြစ်သည်။
Seinfeld Netflix အဖြစ်မှန်စီးရီးအသစ်တစ်ခုကိုမှုတ်သွင်းသည့်အခါယခုနှစ်အစောပိုင်းကပင်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ထွက်ရှာတွေ့သောအခါမကြာမီအနာဂတ်၌ Netflix ကရိုက်စီးရီးအကြောင်းပိုမိုသိစေရန်ပါလိမ့်မယ်! ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ!
နှလုံးရာသီ၏ရာသီ 11 တက်ပေါ်လိမ့်မည်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်ကင်မရွန်နှင့် Lauren မျက်စိကန်းသည်
ချုပ်စက်တင်ဘာလ 2015 အံ့သြဖို့အသစ်
အရိုးရာသီ 11 စတင်သောအခါ